Izindaba - Uhlelo olusha lwamandla ayisisekelo lwaseJapan luhlela ukunciphisa ukukhishwa kwekhabhoni ngokuhambisana namandla elanga nawenyukliya
Mayelana nokusalungiswa kukahulumeni waseJapan amandla amashamix (ukwakhiwa kwamandla) ka-2030, sekungene esigabeni sokugcina sokuhlanganisa. Kulinganiselwa ukuthi isilinganiso samandla avuselelekayo ngo-2030 sizokhuphuka ngamaphesenti angaphezu kwayi-10 kuya kuma-36% kuya kuma-38%, futhi amandla enuzi azogcinwa. Okwamanje ama-20% kuya kuma-22%. UNihon Keizai Shimbun ubike ukuthi uhulumeni waseJapan unethemba lokuthi ngokulungisa kabusha ukuxubana kwamandla, imithombo yamandla kagesi engasebenzi izobala cishe u-60% wengqikithi, inciphise ukukhishwa kwegesi engcolisa umoya ngesikhathi sokukhiqizwa kwamandla kagesi.
UMnyango Wezomnotho, Uhwebo Nezezimboni waseJapan uhlela ukuphakamisa lolu hlelo “lwe-Energy Basic Plan” nokuxubana kwamandla eKomitini Elincane Lezinqubomgomo zeComprehensive Resources and Energy Survey (Isikhungo Sokubonisana sikaNgqongqoshe Wezomnotho, Ezokuhweba Nezezimboni) ngoJulayi 21 okusalungiswa. Ngokwe- “Energy Basic Plan” yamanje, imigomo yeJapan yamaphothifoliyo ka-2030 ingu-22% kuya ku-24% yamandla avuselelekayo, ama-20% kuya kuma-22% wamandla enuzi, kanye nama-56% okukhiqiza amandla kagesi ashisayo.
Uhlaka lwe- “Energy Basic Plan” oluzophakanyiswa kulokhu luveza inhloso entsha. Ukwengeza ekukhuliseni amandla avuselelekayo kanye nokugcina inani lamandla enuzi, inani lokuphehlwa kwamandla kagesi ezishisayo lizokwehliswa libe ngama-41%. Ngokuqondile, ukuze kuzuzwe inhloso entsha, inani elikhulu lamandla elanga lizokwethulwa. UMnyango Wezomnotho, Ezokuhweba Nezezimboni muva nje uphakamise ukuthi izindleko zokukhiqizwa kwamandla elanga ngo-2030 zizobe ziphansi kunalezo zamandla enuzi, okwenza kube yindlela eshibhile yokukhiqiza ugesi okokuqala ngqa. Kodwa-ke, kuya ngokuya kuba nzima ukuthola indawo eyisicaba laphoamaphaneli elanga afakiwe, okwenza kube nzima ukufeza.
Mayelana namandla enuzi, yize uhulumeni waseJapan enethemba lokugcina isabelo samanje sokuphehlwa kukagesi ngonyaka ka-2030, umbono uthi zonke izingxenye zamandla enuzi ezingama-27 izinkampani ezizimele ezifaka isicelo sokuqalisa kabusha ukusebenza zingasebenza, kuyilapho kuphela eziyishumi ezisasebenza njengamanje. Uhlelo olusha lwe- “Energy Basic Plan” nalo alusibhalisi isidingo sokwakha noma sokuvuselela izikhungo zamandla enuzi. Kuyakhathaza ukuthi ukukhiqizwa kwamandla enuzi kuzoncipha esikhathini esizayo. IJapan kufanele izuze inhloso yokuthola "ukungathathi hlangothi kwekhabhoni" ngo-2050, futhi amathemba ahlala engacacile.